Estera 1: 1-22
Estera 1 Estera 2
dia tamin'izany andro izany, raha nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianian'ny fanjakany, izay tany Sosana renivohitra, Ahasoerosy mpanjaka,
Ary nasehony andro maro, dia ny valo-polo amby zato andro, ny harena amam-boninahitry ny fanjakany Ary ny tabiha sy rehareha momba ny fahelehibiazany.
Ary nisy lamba fotsy misoratsoratra sy manga nifehy tamin'ny kofehy rongony fotsy sy volomparasy tamin'ny masom-bolafotsy sy tsangantsangany vato marmora fotsy; Ary nisy farafara volamena sy volafotsy teo amin'ny lampivato alabastara sy marmora tsy sy hara Ary marmora mainty.
Ary ny olona dia nampisotroina tamin'ny kapoaka volamena (samy hafa avokoa ny kapoaka), Ary betsaka ny divain'ny andriana araka ny fanomen'ny mpanjaka.
Ary ny nisotroan'ny olona dia araka ny tenin'ny andriana, ka tsy nisy nanery; fa toy izany no nandidian'ny mpanjaka ny mpitandrina ny tranony rehetra mba hanaovan'ny olona araka izay sitrapony avy.
Ary tamin'ny andro fahafito, nony faly ny fon'ny mpanjaka azon'ny divay, dia nomeny teny Mehomana sy Bizta sy Harbona sy Bigta sy Abagta sy Zetara Ary Karakasa, tsindranolahy fito izay nanompo teo anatrehan'i Ahasoerosy mpanjaka,
Mba hitondra an'i Vasty, vadin'ny mpanjaka, ho eo anatrehan'ny mpanjaka, misatroka ny satroboninahitry ny fanjakana, mba haseho amin'ny olona sy ny mpanapaka ny hatsara-tarehiny; fa maha-te-hizaha izy.
Fa Vasty vadin'ny mpanjaka nandà ny tenin'ny mpanjaka nentin'ny tsindranolahy ka tsy nety nankany. Dia tezitra loatra ny mpanjaka, ka nirehitra tao am-pony ny fahatezerany.
Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny olon-kendry izay mpanandro (toy izany no nanaovana ny raharahan'ny mpanjaka teo anatrehan'izay rehatra nahalala lalàna sy fitsarana;
Ary teo akaikiny dia Karsena, Setara, Admata, Tarsisy, Maresa, Marsena, Memokana, mpanapaka fito tamin'i Persia sy Media, izay nahita ny tarehin'ny mpanjaka ka nipetraka tamin'ny fitoerana aloha teo amin'ny fanjakana):
Ahoana no hanaovana an'i Vasty, vadin'ny mpanjaka, raha araka ny lalàna, satria tsy nankato ny didiko, izaho Ahasoerosy mpanjaka, nentin'ny tsindranolahay izy?
Dia namaly Memokana teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ka nanao hoe: Tsy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ka nanao hoe: Tsy tamin'ny mpanjaka ihany no nanaovan'i Vasty, vadin'ny mpanjaka, izao ratsy izao, fa tamin'ny mpanapaka rehetra koa sy ny vahoaka rehetra isan-tokony eran'ny fanjakan'i Ahasoerosy mpanjaka;
Koa raha sitraky ny mpanjaka, dia aoka hisy didim-panjaka hivoaka avy eto amin'ny mpanjaka ka hosoratana ao amin'ny lalàn'i Persia sy Media ka dia tsy hovana, fa tsy hahazo hankeo anatrehan'i Ahasoerosy mpanjaka intsony Vasty; Ary ny voninahitr'i Vasty dia aoka homen'ny mpanjaka ho an'izay vehivavy hafa tsara noho izy.
Ary raha torina eran'ny fanjakany rehetra (fa lehibe izany) ny lalàn'ny mpanjaka izay hataony, dia samy hanome voninahitra ny vadiny avy, na lehibe na kely, ny vehivavy rehetra.
ka nampitondra taratasy izy ho any amin'ny isan-tokony araka ny sorany avy, Ary isam-pirenena araka ny fiteniny avy, mba hahatapaka ny ao an-tranony avy ny lehilahy rehetra, Ary samy hiteny araka ny fiteniny avy isam-pirenena.